UKUDLULA, UKUFA NOKUVUKA KUKAYESU
La uthando, ukufa nokuvuka kukaYesu Ibalisa ngenkqubo yonyana kaThixo azinikeleyo ukusindisa umntu ngamnye wehlabathi, ehamba nazo zonke izono, oku kwakuphantsi komyolelo kakumkani apho uYesu wamkela ubizo lwakhe, eli nqaku lishwankathela ukuba le nkqubo yayinjani.
INkosi uYesu yadlula kwiinkqubo ezininzi, phakathi kwazo ingunyana kaThixo owayeya kuzinikela ukuze asindise umntu ngamnye, ngexesha lomnqweno, ukufa nokuvuka kukaYesu baninzi abalinganiswa, phakathi kwabo abafundi bakhe ababesebenza ngokuthe ngqo, amaJuda nangaphezulu, oku kubonakala kwisishwankathelo sokwenzeka kwefayile uthando, ukufa nokuvuka kukaYesu.
UYesu wayehamba nabafundi bakhe esiya emlanjaneni oyiKidron, indawo eyayidla ngokufikelelwa ngabo, ngoko uYudas umfundi owayeza kumngcatsha naye waya kuloo ndawo enezibane, neetotshi; UYesu wayesele eyazi le meko, ngoko ke xa abantu beza kumfuna, naye ngokwakhe wavuma ukuba ungubani, wathi kubo, “Ndinixelele ukuba ndinguye; ukuba ufuna mna, bayeke aba bahambe ”.
UPeter wazama ukumnceda kule meko, nangona kunjalo, no Yesu ngendlela efanayo wasiwa kwi-atrium kaPontiff, uPetros wayebalandela, nangona kunjalo, xa wabuzwa ukuba wayengomnye wabafundi baka Yesu, wamkhanyela; Umbuzo kaYesu wenziwa kwaye baqhubeka bebuza uPetros ukuba wayengomnye wabafundi, kodwa wamkhanyela kathathu emva koko yalila inkuku njengoko wayetshilo uYesu.
UPilato wadibana neqela labantu kwaye uYesu wabuza ulwaphulo-mthetho alwenzileyo, amaJuda acela kuYesu isigwebo sentambo, kuba phantsi komthetho wabo babengenakusisebenzisa, nangona kunjalo, uPilato wathetha noYesu waxelela amaJuda Akafumananga naluphi na uhlobo lwetyala kuye, kodwa walandela umnqweno wabo wathumela uYesu ukuba abethwe.
Amajoni asebenza kwaye abeka isithsaba sameva entlokweni kaYesu, ambatha iingubo ezimfusa, ambetha ngempama; Kodwa uPilato wayesayithandabuza loo nto, kuba akafumananga siphoso, nangona kunjalo, amaYuda enza uloyiko kuye ecela ukuba abethelelwe.
Ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kukaYesu
Banika uYesu umnqamlezo ukuba awuthwale ngecala lakhe eliya kuKhakhayi, apho wayebethelelwe khona emnqamlezweni, kunye nabanye ababini, emnqamlezweni bamchonga njengoKumkani wamaJuda, kodwa abavumanga, nangona kunjalo, uPilato khange ndibonakalise tshintsho kuyo kwaye ndathi "Oku ndikubhalileyo kubhaliwe."
Ukubethelelwa kukaYesu emnqamlezweni kwenzeka, amajoni athatha ithuba lokuthatha iimpahla zakhe kwaye nengubo yakhe yanikwa ithuba, kanye njengoko uYesu waye bonisile; ecaleni komnqamlezo kwakukho unina kaYesu, udade bonina, umfundi; Banika uYesu iviniga ukuba asele kufutshane kuba wabonisa ukuba unxaniwe, ngala mzuzu wawukhupha umoya wakhe.
Ukuba ufumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: UYesu Oyinyani UThixo Nendoda Yokwenene.
AmaJuda avakalise umnqweno wabo wokophula imilenze yabo babebethelelwe emnqamlezweni, xa babona uYesu efile zange bayenze naye, kodwa elinye lamajoni laphosa umkhonto ecaleni kwakhe kwaphuma igazi negazi, ezalisekisa izibhalo ezingcwele. abantu babejonge ukuba bayamgqobhoza, kodwa abayi kwaphula naliphi na ithambo lakhe.
UPilato wavumela ukuba umzimba kaYesu uhanjiswe, bawusongela ngelinen, kunye namavumba okuwungcwaba, bawubeka eParasceve yamaJuda kulandela amasiko abo.
Ekuseni ngoMgqibelo, uMary Magdalene wabona ukuba ilitye lengcwaba lasuswa, lashenxiswa, wakhawuleza waya kubafundi bakaYesu abathandekayo waya kuphawula kubo, UPeter nomnye baya kwindawo abayibonayo ukuba imizobo isongwe kwaye isigqubuthelo waye wabekwa yedwa, edala intandabuzo kubo malunga noko kwenzekileyo nokuba ilizwi likaThixo lizalisekiswa njani.
UMariya wabona iingelosi ezimbini engcwabeni ngelixa wayelila kuba wayengazi ukuba uphi uYesu, kodwa uYesu wazazisa kuye wambuza ukuba ulilela ntoni, kodwa akazange amqonde kwangoko, esazi ngako oko, waya kwabelana nabanye ngovuyo; Emva koko uYesu wazibonakalisa kuye wonke umntu abelana ngoxolelo lukaThixo, uMoya oyiNgcwele, enefuthe uthando, ukufa nokuvuka kukaYesu.
Ukuba ufuna ukuqonda ngakumbi malunga uthando, ukufa nokuvuka kukaYesu Sincoma ukubukela le vidiyo ilandelayo: